Moscow akunzima kangako ukuthola indawo lapho ungakwazi ukuchitha isikhathi fun nengane yakho. Cishe nsuku zonke e-dolobha zihlukile orientation izenzakalo - ukusebenza, isekisi lokwentiwako, imibukiso kanye nokunye okuningi. Ezokuzijabulisa ngomntwana eMoscow ngo anhlobonhlobo futhi phakathi ezihlukahlukene ungakwazi kalula ukhethe okulungile zengane. Kwamanye kumnandi asebenzayo efanelekayo ezinye ezithakazelisayo ukuvakashela Museum, izinkanyezi noma isikhungo zentuthuko. Ngakho, yini izindawo ezithakazelisayo izingane kukhona enhloko-dolobha?
Inketho kakhulu nezingane bazovakashela epaki amanzi, futhi eziningi zazo. Eminyakeni yamuva, ukuthandwa amanzi ezikhangayo seliphakeme kakhulu. Umhlangano omkhulu kunayo yonke ukuzijabulisa centre - "kVA-kVA Park". Kukhona amasayithi amaningi athakazelisayo, kuhlanganise idwala waterfall, amaslayidi amanzi, igagasi pool, inkundla yokudlala yezingane, kwaqhuma amanzi nokuningi.
New "Moreon" ipaki akanikezi ukuzijabulisa ngaphansi ezithakazelisayo izingane. Ngo eMoscow kunjalo, mhlawumbe, epaki amanzi kuphela, futhi kuhloswe iholide omdala. Nokho, ebaleni lokudlala zezingane, etholakala lapha, akuyona wawungaphansi nezinye amapaki yenhloko-dolobha. Amaslayidi namaleveli ahlukahlukene extremality, ichibi spa, umfula kancane, kwenza uxhaxha imitha-130 ka-amashubhu, amaslayidi, "Black Hole", "ulwandle yokufakelwa" - igagasi echibi elikhulu, ukugibela udonga.
"Caribou" kubhekwa isikhungo agcwele kuze kube iholidi ngaphambi umndeni, naphezu lingakanani encane. Kuyinto kufanele uyaziqhenya isimo abahlanzekile amanzi ipaki eMoscow. Kukhona 4 amaslayidi, a Jacuzzi, emadanyini okubhukuda, kanye cinema, imigoqo eziningana, isikhungo sauna, amabhiliyade, ukuyodlala i-bowling, spa, enkundleni yomdlalo webhola omncane, imishini umdlalo.
No kancane aziwayo yilezi: "Fantasy", "Yong-Life," "Kimberley Land".
Ipaki izingane eMoscow
Enhloko-dolobha, kukhona amapaki ezingaphezu kwezingu-70. Batinikela ithuba uphumule emoyeni opholile, ukugibela ugibele, ukondla izinyoni, izilwane, iqhaza imidlalo. Ezokuzijabulisa, ezihlanganisa amapaki ezokuzijabulisa, ungabali. Ngokuyinhloko, wonke unikele carousel, bumper izimoto, izitimela nokunye okunjalo, kodwa ezinye zazo zingabantu engavamile, amafomu ezingavamile lokuzijabulisa.
The main ezimbili epaki giant - kungcono Gorky futhi Sokolniki, lapho kungenzeka ngisho kudingekile ukuze uqondise izingane. Ubuningi ukuzijabulisa lapha nje ezimangalisayo. Gorky Ipaki has a rolling velomobile, ezinamasondo ngamanani neze kulokho. Futhi, amakilabhu zezingane, ipaki isikeyiti, a ipaki ezincane izingane, trampolines. Futhi uma usukhathele, baba baningana Neskuchniy epaki inikeza ezihlukahlukene zokuzijabulisa izingane. E-Moscow, zikhona yini ezinye izindawo ezithakazelisayo ezifana eMoscow 850, Filevsky epaki, ukusebenza-zorbing ithrekhi - Luhambo yesimanje esiyingqayizivele. Izmailovo Park ne "emjahweni" futhi "roller coaster" futhi Petrovsky Park ne ujantshi, "Balloons amanzi" elektrolodkami nabanye abaningi. Rides ayatholakala ezindaweni eziningi yezitolo iholide ezitolo ezinkulu, nezitolo ezinkulu.
Ezikhungweni eziningi ezikhethekile eMoscow okulungiselelwe amageyimu isikhala, imincintiswano, imenyu esikhethekile izivakashi omncane. Ngokwesibonelo, cafe, "Fairy Tale," "Anderson", "MumiKafe" nabanye. Kuyaphawuleka ukuthi basebenzela unyaka wonke, futhi kulula kakhulu.
amapaki Abaningi sengilungisile uhlelo, isibonelo, edumile ipaki izingane eMoscow - Gorky. Kuze 31 Agasti, wuhlelo "esikoleni oluhlaza", lapho izingane nazane eduze nezwe isilwane kanye nemvelo. Ngo Sokolniki egijima "Disco Densik". Izingane ezivela engu-3 ubudala ungakwazi dance umculo ezimaphakathi zakho ozithandayo. Kungenwa mahhala.
Umuzi ine a inqwaba nemibukiso, ezifana ukufakwa "ethi Alice in Wonderland", i "Robostantsiya" interactive, embukisweni othi "INdlu yiRefa."
Emasekisini yaseshashalazini izingane
Imisebenzi Ezinganeni eMoscow ngempelasonto hhayi kuphela ukunikeza yeshashalazi, emasekisini dolobha. Abakwazi ukuthola isethulo for abancane ukuze ivumelane yonke akuthandayo. Ukuvakashela endaweni enjalo, akukho ingane ngeke ihlale qakala ubuciko, uthole okuningi okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele okwakusendleleni umuzwa wakhe izimiso kuyisiphazamiso esimisweni sokuhle nokubi. Moscow Puppet Theatre "The Magic Lamp" kubhekwa kakhulu ezweni lonke. Kukhona lokwentiwako inganekwane by Pushkin, Marshak, Kipling, kanye ukuhlela imibukiso, izethulo izincwadi zezingane. Ayikho ethandwa kancane futhi Russian Academic Youth Theatre. Repertoire kuhlanganisa kulungiselelwa classical, inganekwane, izinganekwane umkhiqizo.
Futhi-ke, lapho sikhetha ezokuzijabulisa ngoba umntwana eMoscow ungakhohlwa ukuthi kukhona emasekisini ezinhlanu edolobheni. Iningi abadumile wabo - YaseMoscow Circus ku Tsvetnoy Boulevard ngesikhathi Vernadsky Prospekt. Ngalo mbuzo wesibili ngobukhulu emhlabeni eyenzelwe izihlalo 3400.
Fun for abancane
Ezinganeni kusukela ngonyaka 1 uhlale evulekile, "Green Door" - isikhala ihlelwe yiNhlangano Yanusha Korchaka. Kukhona unodoli izindlu, amaslayidi, izimoto, izitebhisi, cubes, endaweni imidlalo onokuthula ezinomsindo, kanye nendawo izingane angakawamukeli ukufunda ukucathula. Izingane ukufunda ukuze uxhumane emphakathini, bonke ngaphansi kokuqondisa zokusebenza kwengqondo kanye nothisha. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ivuliwe noma yiluphi usuku ngaphandle ngoLwezibili nangoMgqibelo, ungakwazi ukuza mahhala.
Ezokuzijabulisa izingane eMoscow sipho "ingadi Lomama", Seasons, lapho ungakwazi ukuza usuku lonke futhi ukuchitha isikhathi izinzuzo kokubili ingane kanye nonina. "Limpopo" - kukhona amakilasi dance Improvisation, imidlalo Montessori. Njengoba "Pampa Green", Babycontact, "Baby Club" futhi "ukuzalwa yesibili".
Ezokuzijabulisa for engu-2 abaneminyaka
Ezinganeni walonyaka yini ukuzijabulisa e lesitimela. Ziningi izimoto, izitimela, iziteshi, izenzakalo agcinwe nge imincintiswano kanye giveaways. Futhi izingane ezineminyaka engu-2 kuyoba ezithakazelisayo anama zoo. E-Moscow, eziningi zazo. Pat sondle izilwane epaki kungenzeka "Injabulo", kukhona onogwaja, umhlambi ezinyamazane, izimbuzi, izingwejeje, ezingaphezu kuka-150 zezinyoni. ethandwa kakhulu "baby izilwane njengoba amathoyizi," "Gorky", "umhlaba wami omncane" "IPharadesi Emangalisayo". Futhi ukuzijabulisa ezithakazelisayo izingane ezineminyaka engu-2 eMoscow ukunikela Animal Theatre V L. Durova Theatre Yuri Kuklachev amakati. Ziyakwazi lokwentiwako, kwaguqulwa izibukeli ezincane. Ngokusho isikhathi isethulo short ngokwanele ukuze izingane kalula ulandele sakhiwo, futhi bakhuthazelela e ukusebenza enjalo.
Imisebenzi izingane kusukela eminyakeni emi-3
Ukungcebeleka izingane kusukela eminyakeni 3 ubudala efanelekayo evakashele emnyuziyamu noma enkundleni yemidlalo yaseshashalazini. Ngokwesibonelo, Museum of Folk amathoyizi "Zabavushka" zindaba ezingamanga endlini "Kwasukasukela", "Soyuzmultfilm" - Museum of ifilimu studio. EMoscow upopayi lesifunda nkundla eziningi ukusebenza, ngokuqinisekile uthanda abantwana. Abanye babo badlulela iminyaka, isibonelo, "Golden Inkukhu", "Pig Chalk."
Enye indawo ezithakazelisayo lokuzijabulisa izingane iminyaka engu-3 e Moscow - Darwin Museum. Yavula muva nje, kodwa uye wakwazi ukubamba fancy izingane eziningi kanye nabantu abadala. Uhluke ngokuphelele kwezinye. Ifomethi entsha emhlabeni yolwazi, ubuchwepheshe bama-computer anamuhla ukusiza uzijwayeze emhlabeni nezakudala ukuba bagcine kwemvelo kusukela ekuqaleni kuze kube namuhla ngaphandle kosizo umhlahlandlela. Museum kuyobenza babe nezingane kokubili onokuthula asebenzayo. Abanye ziphephile ungakwazi ukuthinta, ukuhambisa.
Indoor ipaki Happylon ekahle kwezingane ezihlala zimatasa. Kuhlanganisa carousel, yaseshashalazini movie, imishini umdlalo, mazes. Rides ezibhekwa kakhulu, kodwa kuphephile, njengoba bayahlolwa kahle. Lapha imincintiswano ezahlukene imiklomelo, cafe, igumbi inkonzo lucwaningo kuphela, abasebenzi abaqeqeshiwe abaqeqeshiwe.
Izithakazelo ekuthuthukiseni ukuzijabulisa isikhungo izingane eMoscow "Seventh Rainbow" futhi "Cosmic", etholakala yezitolo "European". Le nethiwekhi, yaziwe eRussia izikhungo zayo sokuzilibazisa asebenzayo izingane.
Pastime nezingane enhloko-dolobha kalula wenze ezithakazelisayo futhi zihlukahlukene, ngoba eMoscow ukhonza ezihlukahlukene izindawo ezokwenza abantwana ziyavutha injabulo futhi ujabulele umphefumulo.
Beverly Hills: California kukhanye bubuhle
Gorky Park noma Green Park
Ukukhilosha ijezi: onobuhle owesilisa nowesifazane
Kungani ukuphupha ngani zangaphansi? Dream ncwadi uzokuphendula
5 izikhwama oyisebenzisayo ngamunye ngo-2016
Okuvame kakhulu amagama Belarusian: uhlu imisuka
Grilles Ukushisa radiators design izinhlobo kanye nezinzuzo zabo
UMfundisi Hatha Yoga Bulanova Olga
Novosibirsk College of umkhakha ukukhanya isevisi: incazelo okukhethekile kanye nokubuyekeza